Cameron.....: May 2019
ကျွန်မ Keto Consumerရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဒီမုန့်လုပ်နည်းလေးကို Pinterest မှာသွားကြည့်ပြီး လုပ်ထားတာပါ...။ သတင်းကောင်းပြောရဦးမယ် ကျွန်မရဲ့ consumer က Keto စားပြီး တစ်လခွဲမှာပဲ (without Gym) 14 ပေါင်လောက်ကျပါတယ် ...။ ကိုယ် Keto ချက်ပေးရကျိုးနပ်သွားတယ်...။ ၀ိတ်ချချင်သူများ စိတ်ဝင်စားရင် လိုက်လုပ်လို့ရအောင်ပါ...။ Keto ရဲ့ Menu တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Ingredient တွေက ဈေးကြီးတာတွေများတယ် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းမယ့် နည်းလမ်းလေးလည်း ရှိပါတယ် ။ နောက်ပို့စ်တွေမှာ Keto ရဲ့ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အစားအသောက် ဇယားလေးတွေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဘာတွေစားလို့ရလည်း ဆိုတာလည်း ပြောပြပါမယ်..။
မုန့်လုပ်နည်းလေးမပြောပြခင်မှာ သူ့ရဲ့ ကုန်ကျမယ့်စရိတ်ကို အကြမ်းတွက်ပြချင်ပါတယ်....။
Mozzarella cheese2cups 8000MMK
Cream cheese2Tbs 1500MMK
Almond Flour 1 1/2 cups 1000MMK
Baking Powder 1 TBs 200MMK
Eggs2Nos 300MM
11000MMK/6 Bagels = 1850MMK per 1 Bagel
ဒါက မုန့်မှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းသက်သက်ပဲရှိသေးတယ် မီးဖိုးနဲ့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ Microwave တို့ Oven တို့ရဲ့ အချိုးကျအရင်းပါထည့်တွက်လို့ရသေးတယ်...။ Professional လုပ်ရောင်းရင်တော့ အရင်းကို နှစ်ဆ ပေါင်းတင်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်...။ ဒါက Bagels ချည်းသက်သက်နော် သူ့နဲ့တွဲဖက်စားမယ် ထောပတ်တို့ ချိစ်တို့ Ham တို့ Tuna တို့မပါသေးဘူး...။ ဘယ်လိုပဲ မုန့်ရဲ့ရုပ်ထွက်မလှပါစေ အရသာအတွက်တော့ ရာနှုန်းပြည့် အာမခံတယ်...။ တစ်ခုစားပြီးရင်လည်း နေ့တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် အစာခံပါတယ်...။ တော်ရုံဗိုက်မဆာတော့ စားချင်စိတ်လည်း သိပ်မရှိတော့ ၀ိတ်တက်ဖို့လဲ မရှိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ သူက Carb လုံးဝမပါတဲ့အတွက် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားမို့ Ketogenic ထဲဝင်တာပါ...။
As my Keto consumer ask me to make this Keto bagels, then I need to learn from my pinterest video onece. This recipe is very very easy and take no longer. Even your first time experience 200% no fail, I guarantee :) When I knead cheeses dough and flour mix with hands, it was very sticky to handle. But finally, I managed to pull togetheraball of dough. I rubalittle coconut oil to my hands when I shape the dough into rings form.
1. Mix almond flour and baking powder in the bowl.
2. Microwave cheeses for 90 seconds.
3. Add eggs in cheeses and fold with spatula.
4. Add in flour mix and knead with hands until the dough comes together
5. Divide the dough into6portions.
6. Shape the dough intoaball first and form ring.
7. Sprinkle sesame seeds or poppy seeds and place the dough on the baking tray.
Preheat oven at 190ံC bake for 20mins or till its golden brown. Consume hot or cool with butter, ham, tuna, salad and anything you like.
ကျွန်မတို့ ပထမဆုံး Microwave ထဲကို Mozzarella cheese နဲ့ Cream cheese ကို နယ်လို့လွယ်ကူအောင် စက္ကန့် 90 အပူပေးပါမယ်...။ ထွက်လာတဲ့ cheese ပျော့ပျော့တွေကို စီလီကွန်ယောင်းမ မရှိရင် သစ်သားယောင်းမ ထမင်းခတ်တဲ့ ယောင်းမအပြားနဲ့ သမအောင် စေးပိုင်အောင်မွှေပြီးနယ်ပေးပါ...။ သမသွားရင် ကြက်ဥနှစ်လုံးဖောက်ထည့်ပြီး ထပ်နယ်ပေးပါရှင့်...။ ကြက်ဥနဲ့ ချိစ်တွေ သမသွားရင် ဗာဒံစေ့မှုန့်နဲ့ ဘေကင်ပေါင်ဒါ ရောထားတာတွေကို ထည့်နယ်ပေးပါ ..။ နယ်ရင်းနဲ့ မုန့်သားလုံးတစ်ခု ရသွားပါမယ်...။ လက်နဲ့ပဲနယ်ပေးပါ...။ မုန့်သားရရင် အလုံးလုပ်ပြီး ဓါးနဲ့ ခြောက်ပိုင်းပိုင်းပါ...။ တစ်ပိုင်းချင်းဆီယူ မုန့်လက်ကောက်ပုံလုပ်ပြီး မုန့်ဖုတ်ဗန်းပေါ် သုံးခုဆီ စီပေးထားပါ...။ မုန့်ပေါ်ကို နှမ်း သို့မဟုတ် ဘိန်းစေ့လေးတွေရှိရင် ဖြူးပေးပါ...။ 190ံC ကြိုတင်အပူပေးထားတဲ့ မီးဖိုထဲကို မိနစ်20 ဖုတ်ပေးပါ ...။ မုန့်သားအကျက်ညီအောင်လို့ ဆယ်မိနစ်ပြည့်ရင် မုန့်ဗန်းကို ရှေ့နောက်လှည့်ပေးပါ...။ မုန့်ရရင် အအေးခံပြီး မိမိနှစ်သက်ရာနဲ့ စားသုံးနိုင်ပါပြီ...။ ချီးစ်များများနဲ့ ဗာဒံစေ့အမှုန့်တို့ကြောင့် ငံငံဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့ အရသာကတော့ လွှတ်ကောင်းပဲ။
Almond flour နဲ့ Baking powder ကိုလည်း ဇလုံသပ်သပ်တစ်ခုထဲ ရောသမနွှေထားပေးပါ
5မိနစ်အကြာမှာ မုန့်တွေ ဒီလိုပွလာကြပြီ
My yummy bagels is ready........ to consume
Enjoy Baking !!!!!!!!
ဆရာကျား(Big Bag ကျားပေါက်)ရဲ့ Anger Management အယ်လ်ဘမ်ထဲက ဒီသီချင်းလေး ကြိုက်တယ်...။ လောလောဆယ် ကျွန်မသီချင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူသိခွင့် နားထောင်ခွင့်ရတာ ဖုန်းထဲက Joox ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ..။ Pencell ကရိုက်ပေးထားတဲ့ Animated MV လေးက ချစ်စရာလေးပါ။ ဆရာကျားသီချင်းတွေက ခံစားမှုအပြင် အတွေးတွေအများကြီးပေးတတ်တယ်...။
.......ဒီစိတ်နဲ့ ကျရှုံးရင်း သတိရတယ်.........
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က Time Link မှာသွားဝယ်ခဲ့တာ Artist ဟန်ထူးလွင်(ကျားပေါက်) ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတာကို Print ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်လေး ...။ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုအပ်ပြီးဆွဲရင် ဒေါ်လာ ၃၀၀ အနုပညာကြေးပေးရပါတယ်...။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ Nike တို့ Addidas တို့လို အဖြူပလိန်းလေးတွေရှိရင် သွားဆွဲလို့ရပါတယ်...။ ကြော်ငြာပေးတာ...အလျှော်ခံအောင် ဆွဲပြီးသားအရုပ်ပေါ်မှာ ရေစိုခံဖယောင်း code ပေးတယ်လို့ကြားတယ်...။
ဒါက ကျားပေါက်ရဲ့ Bipolarbear Tshirt
Posted by Cameron at 13:04 No comments:
ခုလက်ရှိ ကျွန်မရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ကျွန်မ ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ...။
ကျွန်မ စိတ်တွေက တခါတခါ ဟိုး...အဝေးကြီးကိုရောက်နေသလိုလို ကျွန်မနားမှာပဲ နီးနီးကပ်ကပ်ဝဲနေသလိုလို... လမ်းတ၀က်မှာပဲ ခဏတဖြုတ်ပျောက်သွားသလိုလို။
တစ်စုံတစ်ရာကို ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရဖို့ တံတိုင်းတစ်ခုက ကာရံထားသလို ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဘောင်တစ်ခုထဲမှာ မွန်းကျပ်ပိတ်လောင်ခံနေရတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်...။
တစ်ခုခုကို လုပ်ချင်လို့ ဒါမလုပ်ရဘူးလို့ တားမြစ်ခံရသလို တစ်ယောက်ယောက်ကို သတိရလို့ ရင်ဖွင့်ချင်လည်း ရင်ထဲမှာပဲ တိတ်တိတ်ကလေးသိမ်းဆည်းထားရမယ်လို့ ကန့်သတ်ခံရပြန်တယ်...။
မြင်တွေ့တို့ထိလို့မရနိုင်တဲ့ နံရံရဲ့အခြားတစ်ဖက်က တစ်စုံတစ်ရာကို ကျွန်မလွမ်းပိုင်ခွင့်တောင် မရှိဘူးလား...။ ဒါဆို ကျွန်မကို လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ပြုထားတာဟာ အလကားပဲပေါ့...။
ခုတော့ ကျွန်မဟာ နုဖတ်တဲ့ သွေးကြောမျှင်တွေနဲ့ ယှက်ဖွဲ့ထားတဲ့ အတောင်တစ်စုံနဲ့ လိပ်ပြာတစ်ကောင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး.......။ ဒါကြောင့် သင်းထုံမွှေးပျံ့တဲ့ ပန်းခင်းကြီး ရှိသော်ငြားလည်း လိပ်ပြာတစ်ကောင်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် နားခိုပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူး...။
ကျွန်မဆီမှာ အမှောင်ထုရယ် မမြင်နိုင်တဲ့ နံရံတစ်ခုရယ်ပဲရှိတော့တယ်....။
တကယ်လို့များ နံရံရဲ့တစ်ဖက်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိခဲ့ရင် သူ့ရဲ့နံရံတစ်ဖက်က အလွမ်းကို ခံစားသိရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနိုင်ရုံကလွဲပြီး ကျွန်မ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး...။
အတိတ်ဟာ အိပ်မက်မဟုတ်တော့လဲ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှဟာ သေရာပါ....
Posted by Cameron at 17:05 1 comment:
Posted by Cameron at 11:18 No comments: